Ukusebenza kwePCNakuyiphi na iBug ngeVista | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoJuni 7, 2008 NgoLwesihlanu, Julayi 10, 2009 Douglas Karr
Andibonanga LiveUpdate okanye amaxwebhu kule bug, kodwa kuyacaca ukuba iyachaphazela Abanye abasebenzisi bePCANaphi na iVista. Endaweni yokulinda Symantec Ukuza nokulungisa, ndiye ndafumanisa ukuba i-injini yokuhambisa, iWinawe32.exe ibangela ingxaki.
Cofa ekunene kwibar yakho yomsebenzi kwaye ukhethe uMlawuli womsebenzi.
Khetha Iinkqubo zethebhu.
Gqamisa iWinawe32.exe kwaye ucofe Inkqubo Yokuphela.
Xa ulumkisiwe, cofa Kulungile.
Vala iPCNaphi na.
Phinda uvule i-PCNaphi na kwaye kuya kufuneka ubone onke amanqaku akho ngoku.
Ingalunga ukuba ISymantec ilungise le bug ngePCANaphi, yintlungu yokwenene.
tags: AndroidamakhadicinefiniIzinto zokwazisa umsithofumana iiakhawunti ze-twitterishishini mobileintengiso yangaphandleukuqhuba kwe-usb
I-WordPress: Lawula iiNtengiso kunye noMphathiswa weNtengiso
Agasti 22, 2008 kwi-5: 48 AM
Umcimbi ulungiswe kwi-pcNaphi na apho i-12.5. Ngoku kwi-beta ngoku http://betanew.altiris.com/BetaProducts/PCAnywhere125Enterprise/tabid/148/Default.aspx
pcNaphi na apho umphathi (winaw32.exe) esungula iSessionController.exe. Ukuba ama-winaw32.exe amaxesha aphumile ngaphambi kokuba iseshonicontroller.exe ilayishe, emva koko iba neziphumo kwiscreen esingenanto. Oku kunokwenzeka ukuba inkqubo ixakekile ngexesha le-pcaw32.exe isungula.
Ukuba oku kuyenzeka ngokungaguqukiyo, zama ukumilisela iSessionController.exe kuqala, linda imizuzwana embalwa emva koko uqalise i-pcNaphi na umphathi. Oku kufanele ukusebenza.
Sep 16, 2008 kwi-6: 36 AM
Lo mbandela ulungiswe kwi-pcNaphi na ukukhutshwa kwe-beta eyi-12.5. Ungazama le meko nokuba inkqubo yakho ixakekile.
Sep 28, 2008 kwi-10: 49 AM
Ke, i-12.1 endiyihlawuleleyo ayisebenzi, kwaye akukho nto ikhankanyiweyo kwisiqwengana esifumaneka kwi- symantec.com. Makhe ndiqikelele, uguqulelo lwe-12.5, luyafumaneka, ukuba ufuna ukuhlawulela imveliso kwakhona, kwaye okwangoku, ulahlekelwe ngabathengi. PcNaphi na apho, kwiminyaka eliqela edlulileyo, iguqulwe yaba sisiqwenga somsebenzi, inkqubo enoburharha kunye nokuvavanywa, ukunqongophala kobunini kunye noxanduva kubonakala kuyo yonke into kumntu ofana nam ofake iikhowudi kwiilwimi ezisi-8 ezahlukeneyo kwaye uxhasa iinkqubo zokuphila.
Oktobha 22, 2008 ngo-4: 57 PM
Inkampani yethu isebenzise i-pcNaphi na kulawulo olukude phantse iminyaka engamashumi amabini ngoku. Iibugs kwiinguqulelo zamva nje (i-11.0 nangaphezulu) ziye zacaphukisa, kwaye siye safumanisa ukuba uguqulelo lweshishini lweRealNNC lwenza umsebenzi ofanayo, lusebenzisa izixhobo ezingaphantsi kwenkqubo, imali encinci kufakelo ngalunye ... kwaye ayinangxaki Wokwazi ukubamba iseshoni enye ngexesha.
Ukucacisa ngakumbi: Sebenzisa indawo ekuthiwa yi "Call Call Remote" ye-pcNaphi na apho umgcini abopha khona umxhasi, kuba kwakwindawo efanayo akunakubakho Imikhosi emi-2 “ukuyibiza” ngaxeshanye. Ukuba yikhowudi yenethiwekhi, oku akunangqondo kum. I-VNC ayinayo le ngxaki, kwaye ibonakala ngathi "iyasebenza nje", kwanakwiimatshini ezingafunekiyo naphi na.
Inguqulelo yeShishini yeRealVNC isebenza kwiVista ngaphandle kwemicimbi, nangona inguqulelo yasimahla ethi "host" ayinakuqhuba njengenkonzo kwiVista (imamele nje kakuhle, kodwa icwangcisa kwakhona unxibelelwano ngalo lonke ixesha uqhagamshela). Ukongeza, i-VNC iyiqonga lokwenyani kwaye isebenza "ngaphandle kwebhokisi" kwimizobo yeLinux, ngelixa i-pcNaphi na apho imikhosi inokuqhuba khona kwiWindows (tm).
Wowu, oku kuvakala ngathi yiplagi. Nangona kunjalo, andizalani neRealVNC nangayiphi na indlela ngaphandle kokuba ngumthengi onelisekileyo, emva kokuba i-pcNaphi na apho iimpazamo kunye ne-quirks zisinyanzele ukuba sifumane enye imveliso yolawulo olukude. Sisasebenzisa i-pcNaphi na kwisiseko sabathengi esifakiweyo, kodwa asithengi naziphi na iilayisensi ezintsha kubo.
Kuhle, iinguqulelo ezingaphambi kwe-12.1 azizukuqhuba kwiVista, ndiye ndathenga i-12.1. Ndifumanise ukuba akukho sithuba se-12.1, enyanisweni, andicingi ukuba i-12.1 ixhaswe kwakhona, nangona ikwiimarike hayi kudala, kodwa wamkelekile ukuba uphume uye kuhlawula enye inguqulelo engu-12.5 ngoku.
Mar 16, 2009 ngo-7: 36 AM
mab, kuya kufuneka ube nakho ukufumana i-12.5 simahla. Uhlaziyo olungonyusi inombolo enkulu yenguqulo (eyi-12) ihlala isimahla. Kuya kufuneka unxibelelane nenkxaso yabo nangona kunjalo, kubuhlungu kodwa ndihlaziye i-12.0 ukuya kwi-12.1 ngale ndlela.
Nokuba i-12.5 i-flakey. Kuya kufuneka ndiye ezantsi kumgangatho weendlela ezikude zegalphic ukuze ndiqale okanye ndigcine ngokuthembekileyo unxibelelwano. Ndilinde nje ixesha elithile kwaye ndiza kuvavanya i-VNC endaweni yayo. I-PCA ngoku iswelekile ngokokuchaphazelekayo. Kubonakala ngathi iSymantec ayixhasi kwaye ayikhathali.
Ukuba nabani na uyazi ngalo naluphi na uhlaziyo lwe-Symantec PCA, ipakethi yenkonzo, njl njl. Nge-12.5 ndingathanda ukwazi ngayo.